Garoowe, 8 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Weftigii aadka u balaadhanaa ee ka soo kicitimay Caasimada Maamulka Puntland ee Garoowe, ee uu hogaaminaayey Madaxweyne Gaas ayaa waxaa ka mid ahaa Madaxdii hore ee soo martay Madaxtooyada Puntland oo aanu Faroole ku jirin, iyo Isimo dhaqameedyo tiro badan, iyo weliba Saraakiil Ciidan.
Weftigan ayaa weydiistey Amisom inay amaankooda ilaaliyaan inta ay joogaan Muqdisho, si ay uga qayb galaan aaskii Marxuum Cabdirisaaq Xaaji Xuseen,balse waxa la sheegay inay Amisom diidey codsigaas uga yimid Madaxda Puntland.
Dhanka kale maadaama weftigu ahaa mid culus waxa digniin siiyey hayadaha wax basaasa ee Muqdisho,oo sheegay in nabadgelyada Caasimada aan waqtigan laysku halayn karin oo ay adag tahay wefti intaas le'eg sida amaankiisa loo sugaayo,iyadoo waqtigan Hoobiyayaal lagu garaacaayo magaalada.
Baqdintaas iyo werwerkaas ayaa Faroole ka reebtay weftiga,laakinse waxa la soo weriyey in Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya Jawaari uu u kala dab qaaday Madaxdii Puntland iyo Madaxdii Villa Somaliya si Mr. Gaas u soo kaxaysto ciidankiisa ilaalada ,nasiib wanaagna ay aqbaleen Madaxda Villa Somaliya.
Isku soo waxa xoodhiyoo ciidankan Puntland ka tegay oo qalabkoodu u dhamaa ayaa waxaa u daawasho tegey ciidamadii Muqdisho joogay oo iyagu u ekaa ciidan Beeleed marka aad aragto qaabka ay u shaqeeyaan.